China Camping Tent 2/4 Onye Family tent N'èzí waterproof Tent factory na-emepụta | Sisili
Inglọikwuu na-ama ụlọikwuu 2/4 Onye Familylọ Ntu Ezinụlọ N'èzí
Mbukota opp akpa
Nha: 200 * 200 * 130cm
Ihe: 190T polyester fabric, waterproof 1500-2000mm, 210D oxford fabric
Mmiri mmiri: 2000-3000mm
Mfe Mbido & Ngwa ngwa Were: Jiri aka setịpụ tent a na-azụ azụ dị mfe ma na-atọ ụtọ, ọ na-ewe naanị nkeji 2 iji gbakọta. Iwedata ala dịkwa mfe na ngwa ngwa.
Waterproof & Windproof: Ihe na-enweghị mmiri 190T PET na-ekpuchi akwa, akwa ala 210D Oxford na teepu na-enweghị mmiri na akwa ọ bụla, iji hụ na ime dị kpamkpam n'okpuru ọnọdụ mmiri ọ bụla ọbụlagodi na oké ifufe ahụ.
Rolọ maka mmadụ abụọ: Rolọ maka ndị okenye 3-4. Nnukwu ụlọikwuu mara ụlọikwuu maka ụmụaka scouts na-egwu n'azụ ụlọ, ogige, osimiri, ugwu, wdg.
Ọ dị mfe iburu: onlykwesịrị naanị ịpịkọta ụlọikwuu ahụ ma pịa ya na ihe ndị ọzọ wee tinye ya n'ime akpa ahụ. Ọ bụ ìhè dị arọ ma ọ naghị ewere ohere. Enwere ike itinye ya n'ime akpa, akpa ma ọ bụ ụgbọ ala maka ibugharị ngwa ngwa.
NTRAS AKWASKWỌ: Ọ ga-ewe 10 nkeji. Ọbụna ndị na-enweghị uche nwere ike ịtọlite ​​mfe. Jiri mkpanaka aluminom abụọ tinye ụlọikwuu ahụ site na ọnụ ọ bụla ruo mgbe ị pịa akụkụ anọ nke ụlọikwuu ahụ, nke dị mfe ma na-echekwa ọrụ.
MULTI-FUNCTION: tentlọikwuu ahụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ dị iche iche n’èzí na mmiri, oge ọkọchị na udu nmiri, dị ka njem ụlọikwuu, ịchụ nta, mmemme, ememme egwu dị n’èzí, ka gị na ndị ezinụlọ gị na ndị enyi wee nwee ike ịnọkọ ọnụ n’enweghị nsogbu.
Nke gara aga: Maa ụlọikwuu PET Emergencylọikwuu Emergency tube Tlọikwuu
Osote: N'èzí ọkachamara maa ụlọikwuu waterproof windproof tent 2/4 Onye na aluminum osisi
Aluminom ụlọ Top tent
Tmụ nwoke entlọikwuu
Mslọ Ulo nke Clamshell
Nnukwu eelọikwuu Teepee
Xtm ụlọ Top tent
Maa ụlọikwuu Fire Starter Bushcraft Fire Steel na ...
43 n'ime 1 Ihe Enyemaka Enyemaka Enyemaka Mbụ Kit na Mo ...
N'èzí Tactical n'úkwù Bag EDC Molle echebe ukwu ...
Gear Mberede Mberede, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Xtm ụlọ Top tent, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Vlanahụ Fire Starter, Starter Magnesium oku,